FANDIKAN-DALANA : Tsy maintsy haiditra « fourrière » ilay sprinter ana jeneraly
Atao tsara ambina mihitsy ary tsy asiana fiandaniana fa avy hatrany dia haiditra “fourrière” io sprinter laharana 95… MD an’ity manamboninahaitra iray nanao halatra zotra tao amin’ny fiatsonana rezionaly io, hoy ny tompon’andraikitry ny Att. 8 novembre 2017
Ny talata 01 novambra teo tokoa no nisy naha-tsikaritra ity fiara mpitatitra mpandeha ao amin’ny zotra nasionaly Sonatra ity nameno mpandeha tao amin’ny kaoperativa Komafibo ao amin’ny zotra rezionaly. Izay tena tsy azo atao raha ny lalàna mifehy ny fitaterana no asian-teny, hoy hatrany ireo tompon’andraikitra isan-tokony ao amin’ny fitaterana hatrany.
Vantany vao nahita io fiara tsy manana fahazon-dalana hitrandraka zotra rezionaly io araka izany i Jean Claude Ramanana, ao amin’ny filan-kevi-pitantanana ao amin’ny Att na ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety no sady filohan’ny kaoperativa Kofifam ary filohan’ny federasionan’ny fitaterana eto Mahajanga dia niantso avy hatrany ny talen’ny Att.
Ity farany dia nidina avy hatrany niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana hanao ny fisamborana io fiara io, saingy avy eo dia niaiky ny fahadisoany ilay mpamily ny fiara sy ilay filohan’ny kaoperativa Komafibo nampiantrano ity sprinter nameno mpandeha tao aminy ity. Ka nomena fahazon-dalana manokana ihany ilay fiara handeha avy eo noho ny tsy fisian’ireo fiara tokony hanao fiaingana intsony teo amin’ny fiatsonana rezionaly tamin’io ora sahabo ho tamin’ny 05 ora sy sasany hariva io. Araka ny lalàna velona dia azo atao tsara izany, hoy ny talen’ny Att, i Toky Rahaingo, satria misy karazany roa ny fanomezan-dalana manokana na ny “autorisation speciale : dia ny voatokana ho an’ireo fianakaviana na koa fiangonana, ireo klioba isan-karazany sy ireo mira lenta amin’izany, misy koa ny tsy fahampiana eo amin’ireo fiara ao amin’ilay zotra iray anefa, ka miantso ny fiara namany hanampy azy ireo na ny hoe “renfort” toy ny nomena ity fiara iray ity, saingy nisy fahatarana ny fakàna izany ka tsy maintsy nampiharina aminy ny lalàna, hoy ny Att.
Ity farany rahateo no nanome baiko ny polisy niara-dia taminy teny an-toerana ka naka ireo antontan-taratasin’ilay fiara ka tsy maintsy haiditra “fourrière” io fiara io vantany vao miverina eto Mahajanga raha avy manatitra ireo mpandehany any Mandritsara, noho izao fangalaran-jotra hafa nataony izao na ny “violation de ligne”. Hentitra araka izany ny ao amin’ny Att, amin’ny fampanarahan-dalàna ho amin’ny kalitao tsara amin’ny sehatry ny fitaterana eto Mahajanga mampitohy amin’ireo faritra hafa manodidina. Miantso ny rehetra voakasik’izany ihany koa ny tenany mba ho samy hipetraka ho tompon’andraikitra manoloana ny tranga sy ny zava-misy eo amin’izay fitaterana izay.
Efa mivonona amin’izany isan’andro ihany koa ny ao amin’ny Mmdm na ny mpitatitra Miara-dia eto Mahajanga dia ny federasiona izany amin’ny maha filan-kevi-pitantanana ny tenany ao amin’io antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety io, hoy ingahy Ramanana Jean Claude.
Votsotra ny menoty rehetra natao taminy BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA (275) 13 octobre 2018 Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (187) 15 octobre 2018 Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO (181) 13 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (166) 15 octobre 2018 Niloa-bava sy nitondra valin-kafatra manoloana ny fitakian’ireo kandidà 22 FILOHAN’NY HCC (162) 17 octobre 2018 Efa betsaka ireo lasibatra eto Antsiranana FISOLOKIANA AMIN’NY FINDAY (108) 18 octobre 2018